Izay mihaona amin'ny lehilahy iray any Azia. Kokoa Internals Sehatra Fiadian-Kevitra
Izay mihaona amin’ny lehilahy iray any Azia. Kokoa Internals Sehatra Fiadian-Kevitra
eo anatrehanao afaka mamoaka: tsindrio ny misoratra anarana rohy etsy ambony zao. Hanomboka ny fijerena ny hafatra, mifidy ny fifanakalozan-kevitra fa tsy te-hitsidika avy amin’ny fifantenana eto ambany. Miarahaba ny rehetra, te-hihaona Aziatika iray lehilahy, fa izaho tsy afaka ny hahita ny tsara toerana izay hanao izany. Mety ho fifandraisana na fotsiny namana, saingy tsy hiteny afa-tsy ny teny anglisy, alemana sy ny rosiana, ary miaina ao Rosia, aho tsy miteny ny fiteny (ny tiako lazaina dia tsy afaka mamaky hieroglyphs) ary izay no mahatonga afaka misoratra anarana ao amin’ny ny toerana. Mazava ho azy, misy iraisam-pirenena mampiaraka toerana izay amin’ny teny anglisy fa ny ankamaroan’izy ireo dia isan ny Amerikana sy ny ankamaroan’izy ireo dia tsy manaiky nisoratra anarana avy amin’ny Rosiana, ary na dia manao ny safidy ny Aziatika ry zalahy, dia mety ho liana amin’ny tena ambany dia ambany. Ny ankamaroany dia olona tsy liana ao amiko, tahaka ahy tsy miasa tokana neny ny zazalahy kely ny taona, toy izay aho avy any Rosia sy ny maha-izaho tsy hoe tanora intsony aho. Tsy afaka ny hahita na iza na iza dia iza no manoratra foana na dia hoe noho online namana.
Ny anarako dia i Mikaela aho ny Afrikana scammer mitady irery fotsy ny vehivavy ao amin’ny internet. Mampanantena aho hitia anao raha mbola ianao ranonorana ahy ny fanomezam-pahasoavana (kokoa ny vola). Te-hiteny aho voalohany manala ny ity aho niharam-boina sary. Izaho tsy mahalala izay tombontsoa manokana amin’ny olona iray manokana, fa raha toa ka mila Aziatika fa ny ratsy, afaka manao fikarohana manokana amin’ny fiarahana toerana aho azo antoka. Hiezaka aho mba tsy miraharaha ny nahazo fanehoan-kevitra avy amin’ny sasany adala eto, Koa hoy aho hoe afaka manao fikarohana ao amin’ny malagasy, fa ireo rehetra ireo toerana fiarahana avy eo dia hanala ny Rosiana taorian’ny olona nandany ny fotoana sy ny nahazo nisoratra anarana teo. Any Japana, Korea na Shina, na aiza na aiza avy any Azia mitoetra amin’ny peta-drindrina ‘ny mafy sy ny rosiana tezitra vehivavy mitady lehilahy iray any Azia’ avy eo Aza adino ny milaza ianao mahantra iray neny sarobidy marary taona gem izay nanao tsinontsinona sy tsy ilaina toy ny hoe satria ny taona, ny firenena sy ny sata ara-panambadiana sy ny fahombiazana dia tsy azo antsoina hoe dia miantso ny sasany peta-drindrina ity no azo antoka. OH, miandry, tsy dia mila manao izany, ianao efa mahomby amin’io lafiny io lol. Hiezaka aho mba tsy miraharaha ny nahazo fanehoan-kevitra avy amin’ny sasany adala eto, Koa hoy aho hoe afaka manao fikarohana ao amin’ny malagasy, fa ireo rehetra ireo toerana fiarahana avy eo dia hanala ny Rosiana taorian’ny olona nandany ny fotoana sy ny nahazo nisoratra anarana teo. ary aleoko quote izay manoratra momba ny afisy hafa eto raha tianao ny hamafa izany milalao niharan’ny fanararaotana noho ny nisy indrafo ny saina eto. Raha toa ka miezaka mba hahatonga ny tena misy vidiny ambony indrindra amin’ny alalan’ny fanoratana ny manala baraka ny fanehoan-kevitra izany ny olona diso ianao tanjona izany rehetra izany, amin’ny maha-ianao mandefa ireo rehetra ireo vendrana ireo teny manohitra ny manda, tsy handeha aho mba hanala na inona na inona noho ny adala fanehoan-kevitra izay araka ny nolazaiko tsinontsinona aho raha tsy voalaza dia mahatsiaro ho toy ny lasibatra, ny toe-javatra. Ny olona eto te-hieritreritra intsony ireo zavatra izay tsy toy izany. Mbola miandry ny olona izay afaka manampy ahy ny fikarohana. Tsy liana amin’ny Sina sy japana, dia aleon’ny olona ny teny koreana. Ary raha tsy manana na inona na inona hendry na manampy ny milaza ny momba ny fikarohana avy eo aho dia mampiasa ny fomba fifandraisana — akombony ny makorelina ka handao ny kofehy. Izay ny helo ianao ka manome ahy tari-dalana aho raha tokony hanakatona ny ny kofehy na tsia. Miarahaba ny rehetra, te-hihaona Aziatika iray lehilahy, fa izaho tsy afaka ny hahita ny tsara toerana izay hanao izany. Mety ho fifandraisana na fotsiny namana, saingy tsy hiteny afa-tsy ny teny anglisy, alemana sy ny rosiana, ary miaina ao Rosia, izaho tsy miteny ny fiteny (Ny tiako lazaina dia tsy afaka mamaky hieroglyphs) ary izay no mahatonga afaka misoratra anarana ao amin’ny ny toerana. Mazava ho azy, misy iraisam-pirenena mampiaraka toerana izay amin’ny teny anglisy fa ny ankamaroan’izy ireo dia isan ny Amerikana sy ny ankamaroan’izy ireo dia tsy manaiky nisoratra anarana avy amin’ny Rosiana, ary na dia manao ny safidy ny Aziatika ry zalahy, dia mety ho liana amin’ny tena ambany dia ambany. Ny ankamaroany dia olona tsy liana ao amiko, tahaka ahy tsy miasa tokana neny ny zazalahy kely ny taona, toy izay aho avy any Rosia sy ny maha-izaho tsy hoe tanora intsony aho. Tsy afaka ny hahita na iza na iza dia iza no manoratra foana na dia hoe noho online namana. Hi. Aho Stefan antsika, ary azoko avy amin’ny Indoneziana (Aziatika). Eto aho manana namana avy amin’ny tontolo hafa ny ahy. Afaka fotsiny isika ho tonga an-tserasera-namana? Raha toa ka miezaka mba hahatonga ny tena misy vidiny ambony indrindra amin’ny alalan’ny fanoratana ny manala baraka ny fanehoan-kevitra izany ny olona diso ianao tanjona izany rehetra izany, amin’ny maha-ianao mandefa ireo rehetra ireo vendrana ireo teny manohitra ny manda, tsy handeha aho mba hanala na inona na inona noho ny adala fanehoan-kevitra izay araka ny nolazaiko tsinontsinona aho raha tsy nilaza aho mahatsiaro ho toy ny lasibatra, ny toe-javatra. Ny olona eto te-hieritreritra intsony ireo zavatra izay tsy toy izany. Mbola miandry ny olona izay afaka manampy ahy ny fikarohana. Tsy liana amin’ny Sina sy japana, dia aleon’ny olona ny teny koreana. Ary raha tsy manana na inona na inona hendry na manampy ny milaza ny momba ny fikarohana avy eo aho dia mampiasa ny fomba fifandraisana — akombony ny makorelina ka handao ny kofehy. Izay ny helo ianao ka manome ahy tari-dalana aho raha tokony hanakatona ny ny kofehy na tsia.
Tsy liana amin’ny Sina sy Japana
Tsy misy olana mahazo ny peta-drindrina miaraka amin ‘ny olona mora tezitra, tsy mahalala fomba sy mamoy fo rosiana no mijery fotsiny ho an’ny Koreana. Tsy nilaza anao ho akaiky ny kofehy, dia mety tsy ho afaka, na raha toa ianao te. Tsy an-tsaina ny kofehy, dia vao azoko an-tsaina ny toe-tsaina Misy be dia be ny Aziatika ao atsinanana, Rosia dia tsy misy. Miezaka mijery rosiana mampiaraka toerana, izany dia hanampy be ny toe-javatra raha toa ka tsy maintsy mandeha any ivelan’ny firenena. Mihevitra aho fa afaka mahita ny sasany lehibe ry zalahy fa tsy misy. Efa mampiaraka online loatra ary tsy niasa tsara ho ahy ny fotoana rehetra.
← Shina Chat Room - Sinoa Chat Room - Iraisam-Pirenena Ny Amin'ny Chat
Aiza no toerana tsara indrindra ao London mba hihaona iray Shinoa zazavavy. Video Mampiaraka →